Bangaphi abantu abaya kuphila kwihlabathi, baninzi baya kuba nemibono. Kodwa ukuba uya kuzinzela ukuba ube ngumntu osisigxina, kuya kuba mnandi ukubuza umyeni wakho okanye umhlobo ukuba bathini amadoda malunga nokubunjwa ngokusisigxina komfazi.
Okanye awunakuze uxelele iimfihlelo zakho zeentombi zabancinane. Masihlale siyimfihlo.
Ukwenza i-tattoo ngokusisigxina kusetshenziswe kwamehlo, emacaleni nasemilonyeni. Imiba enjalo yokwenza iimveliso iminyaka emininzi. Emva koko unokwenza kwakhona.
Kukhona izimonyo ezisigxina, ezokukusindisa kwisidingo sokusebenzisa izimonyo zemihla ngemihla, kunye ne-cosmetology, ekwazi ukufihla izikhumbuzo zokuzalwa.
Ukwenziwa ngokusisigxina kusetyenziswa kwinqanaba elincinci lesikhumba, kungekhona njengento enzulu njenge tattoo eqhelekileyo. Ngoko ke, ihlala iminyaka emi-3 ukuya kweyesi-5. Kukho amaxesha apho ukwenza ukulungiswa okusisigxina akunakunconywa: ngexesha lokuya esikhathini, ngokunyanzeliswa kwezifo zesikhumba, ngotywala kunye neminye imichiza. Ukuqulunqwa okusisigxina kubantu abanesifo sikashukela kunye nesifo se-asthma, kunye ne-herpes, isikhumba kunye negazi. Musa ukwenza i-makeup ngexesha lokukhulelwa. Ukuphikisana okuphambili, apho ukucwangciswa okusisigxina kunqatshelwe khona, yindlela yokwakhiwa kwezikhonkwane ze-keloid.
Ukuba ukwenziwa ngokusisigxina kwi-salon ekhethekileyo, ngoko-ke iipaliti eziphezulu eziphezulu kwimifuno okanye kumaminerali zisetyenziselwa isicelo sayo. Inkqubo yesicelo ayibuhlungu ngokupheleleyo kwaye ithatha malunga neyure. Ukufezekisa inkunkuma yendalo, inkqubo iyaphindwa kabili amaxesha amathathu.
Ukuba umntu wakho ujwayele ukukubona ngokuzenzekelayo, kukulungele ukuqhubeka kwakhona. Umhlobo wakho kungenzeka ukuba akacingeli ukuzenzela ngokusisigxina, kodwa ukhetha ukukubona njengokuba esetyenziswe.
Amadoda athile kakhulu ngaphezu koomama, ngoko ke ukuba uya kukwenza, umntu uya kulwa nalo. Akunjalo ngenxa yokuba uya kuba mnandi okanye, ngokuchaseneyo, akumnandi kakhulu kuye. Amadoda athanda isithethe, okanye, ngamanye amazwi, ukuba uyakuthanda ngenxa yokuba ungubani, kungcono ukuhlala njalo. Ngaphezu koko, abanye abantu baneendawo ezibonakalayo zokubonakala, ngokomzekelo, bathanda ama-blondes afanayo. Ukuba ibhinqa liguqula ukubonakala kwayo, iqabane lakhe liya kudanisa, ngamanye amaxesha lide liholele ekuphuleni ubudlelwane.
Kakade, ukubunjwa ngokusisigxina akunakwenzeka ukuzisa umntu kule nto. Kodwa ngokuqhelekileyo uya kuva umbuzo: uthini ke? Okokuthi, ukuba ukwakheka kukukwenza "kungcono", emva kokuphela kwenkcitho kunye nexesha, uya kuba "mbi kakhulu." Kunzima ukuba umntu aqonde ukuba loo mveliso ingahlaziywa.
Ukongeza, umntu wakho unokukhathazeka ngempilo yakho. Uloyiko lwakhe lunokugwetywa, kukho umngcipheko weengxaki. Ipeyinti inokuphelisa kakubi kwaye ihambe kwiindawo, imigca ingaba yinto ephosakeleyo kwaye ingaqiniseki, ngamanye amaxesha kunzima ukukhetha umbala ofanelana nombala wesikhumba sakho. Ngako oko kubalulekile ukukhawuleza ukubuyela kumphathi omhle. Ubungakanani beengxaki ezincinci ukuba i-anesthesia kunye nokunyanzeliswa kwezixhobo zeenkosi zenziwe ngokufanelekileyo, kwaye kuphela iimveliso ezinobungakanani ezisetyenziselwa ukwenza izimonyo. Inkosi kufuneka icinge ukuba umfazi unokugqiba isigqibo sokutshintsha umbala weenwele zakhe, qala ukugqoka iiglasi. Impawu zomntu onokutshintsha ngobudala nazo ziqwalaselwa. Ngaphambi kokuba wenze isicelo sokwenza isigxina, qhagamshelana nodokotela. Ukubumba okusisigxina emlonyeni ngamanye amaxesha kubangele ukubonakala kweetropes. Kwiveki ngaphambi kwenkqubo, kufuneka ufeze iprophylaxis, oza kuxelelwa ngugqirha okanye kwi-cosmetologist, oza kuyenza ukuba wenze i-makeup.
Abantu abaxhasayo bayahlukana nobuhle bemvelo babasetyhini. Indoda enjalo ayikwazi ukubona indlela odayiweyo ngayo. Uhlala ukhangele kuye nangaliphi na ixesha nangaluphi na uhlobo. Nangona emva kobusuku obungenalutho, ubuso obuvuvukileyo, sisona sisithandwa nesithandwa kakhulu. Ngoko ukuba uya kukwenza umhlobo wakho othandekayo, cinga, mhlawumbi akayidingi nhlobo.
Ngakolunye uhlangothi, kukho amadoda angama-gourmet. Ibhinqa kubo kufuneka lijonge "ikhulu leepesenti" nangaliphi na imini yomini okanye ubusuku. Ngaba uyazibuza ukuba yintoni abantu besithi ngokubunjwa ngokusisigxina kwabasetyhini kwimeko? Ngokuqinisekileyo, ukuzenzela kuya kwamkela. Kodwa kungcono ukuba ungabonakali imfihlo yembonakalo yayo ekhangayo.
Kwakheka ngokusisigxina yowesifazane uya kuphendula kakuhle indoda engathandanga xa ibhinqa lidayiwe ixesha elide. Ukwenyusa kuza kusindisa ixesha elikhulu ekuhambeni kwentsasa, enokunikezwa kumntu othandekayo. Okanye ungalala ixesha elide, olu khetho luya kufana namadoda amaninzi.
Ngoko, abantu bathetha ngezinto ezenziwe ngokusisigxina. Xa ukucwangciswa kwenziwa ngokusemthethweni, ngokukhawuleza kuqala ukukholisa wonke umntu. Okanye bafundela nje.
Makhe sibone umbuzo: nini kuyimfuneko ukuxelela umntu ngokumisa ngokusisigxina, kwaye nini na akufanelekanga?
Icala lokuqala liyilungiselelo lokuzibumba. Ukuba unalo ulwalamano oluthembekileyo nolumanyanisekileyo, loo mntu akayi kucinga, makangakhubeki okuncinane. Ukuba udlala isilingo esibulalayo ... apha ngaphandle kokuphawula, cwaka ucefe. Bathi ke abo bazalwa.
Icandelo lesibini yinto yokwenza izimonyo ezifihlekileyo. Ngoncedo lokwenza ngokusisigxina, ungayilungisa ukuma kwe-areola ecaleni kweengono, ukupenda phezu kwezikrakra, iindawo ze-pigment kunye neemeko zokuzalwa eziphathekayo. Ukuba wenza loo mveliso ngaphambi kokuba udibane nomntu wakho, kufuneka uhlale uthule ngaye. Ukuba unokwenza ngokusisigxina emva kokuba uqhelane, umntu onqabileyo akayi kukuxhasa.
Unokumbuza umntu wakho ukuba ngaba, kodwa uluvo lwakhe ngolu hlobo? Nangona uluvo lwakhe malunga nokuzenzela ngokusisigxina ngokubanzi, kwaye malunga nokuzenzela ngokukhethekileyo, lungahluka. Yiba nokuba kunjalo, simele sikhumbule ukuba ukuba umntu wakho uyakuthanda, ngoko uyakuthanda ngenxa yokuba ungubani. Yaye uluvo lwawo onke amadoda alukhathaleli.
I-recipe yokupaka i-pie: i-charlotte
Uhlobo lwempilo kunye nokusilalisa umzimba
I-pizza kunye namaqhonkco okuzingela kunye ne-rocket salad
I-lace kunye ne-glitter: iindlovu zefantasy-i-summer trend-2016
Ukutyhutyha kwemini yamehlo aluhlaza